LifeStyle – SoShwe
ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ ကျားမခွဲခြားမှုပြုလုပ်နေတာက သင့်ကိုစမတ်ကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့အပြိုင် ရင်ဘောင်တန်းလာတဲ့အချိန်မှာ ယောက်ျားလေးမို့လို့၊ မိန်းကလေးမို့လို့ဆိုပြီး ခွဲခြားခွဲခြားလုပ်နေတာတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံက ကလေး (၃) ယောက်အဖေ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ရပ်တစ်ခုကို လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ရုံးသွားရုံးပြန်ချိန်တိုင်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို ဝတ်စားရင်း အဝတ်အစားဆိုတာ ကျားမခွဲခြားခြင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသက် (၆၁) နှစ်အရွယ် မာ့ခ်ဘရိုင်ယန်ဟာ အခုမှဒီလိုမျိုးစတင်လုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်တည်းက အခုလိုမျိုး မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို ဝတ်ဆင်ရင်း အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပါ။ မာ့ခ်ဘရိုင်ယန်အနေနဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝမှာ မိမိချစ်သူနဲ့အတူတွဲကရန် ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ …
Manchester က စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် Phil Smith ဆိုသူဟာ သမီးလေး Sienna ရဲ့ အသက် ၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ထူးခြားပြီး အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေစေမယ့် အမှတ်တရလေးတစ်ခုုကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သမီးလေးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ အရုပ်တွေကို ဝယ်ယူပြီး ဘောလုံးပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ဖွက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သမီးလေး Sienna အနေနဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘောလုံးပင်လယ်ကြီးထဲ လက်ပစ်ကူးပြီး ရှာဖွေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Phil ဟာ Manchester က Ball Mania ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဘောလုံးပေါင်း၂၆,၀၀၀ ကို ယူရို ၂၆၀ ပေးပြီး ငှားရမ်းခဲ့ကာ အိမ်ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံးကို …
McDonald’s ဝန်ထမ်းဘဝကနေ အာကာသဆီ ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကန်နွယ်ဖွား အမျိုးသမီး။
ကတ်ရာ အီချာဇာရာတာရဲ့ဘဝခရီးက ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ McDonald’s ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပြီး အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်မှာတော့ အာကာသဆီ သွားရောက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်ရာဟာ ဂျက်ဖ် ဘေးဇို့စ်ရဲ့ Blue Origin ကုမ္ပဏီက လွှတ်တင်တဲ့ ဒုံးပျံတစ်စင်းနဲ့အတူ အာကာသအစွန်းဆီ သွားရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ထဲ ပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကတ်ရာတယောက် အာကာသဆီ သွားရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးမက္ကဆီကန်နွယ်ဖွားအမျိုးသမီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့အိပ်မက်ပြည့်မြောက်တာထက် သာလွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဘဝတလျှောက်လုံး အာကာသထဲသွားရဖို့ အိပ်မက်မက်နေခဲ့ရတဲ့ ကတ်ရာက ဆိုပါတယ်။ အာကာသထဲ သွားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တောင် ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေဝဲရတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ငုံ့ကြည့်မိလိုက်ချင်းမှာပဲ မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်။ …
သိပ္ပံနည်းပညာအရ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား။
ပျော်ရွှင်မှုကို တိုင်းတာလို့မရနိုင်ပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကျွနု်ပ်တို့အတွက် တစ်နည်းတစ်ဖုံနည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ကြီးသူတွေဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာတစ်ချို့ကနေ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြပေးမယ့်အချက်တွေက သက်သေပြနေပါလိမ့်မယ်။ ၁။ အမြဲတမ်းနောက်ကျတတ်တာကြောင့် အပြေးအလွှားဖြစ်နေတတ်ခြင်း။ အမြဲနောက်ကျတတ်တဲ့သူတွေဟာ ပိုပျော်ရွှင်ကြပြီး အသက်ပိုရှည်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ကျသူတွေက ၎င်းတို့ရဲ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် အကောင်းမြင်တတ်ကြပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ အရာပေါင်းများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ နောက်ကျကျန်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ကျတတ်တဲ့သူတွေဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေမှာ ထိတ်လန့်တတ်ကြခြင်း မရှိပါဘူး။ ၂။ စောစောအိပ်ယာထခြင်း။ မနက်စောစောထတတ်တဲ့သူတွေဟာ အပျော်ရွှင်ဆုံးသူတွေဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သုတေသီများက မနက်စောစောထတတ်သူတွေနဲ့ …
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစစ်အမှန်ကို သိရှိစေနိုင်မည့် သေးသေးမွှားမွှားအကျင့်လေးများ။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင် သတိမပြုမိသည့် အမူအကျင့်သေးသေးလေးများ ရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော အမူအကျင့်သေးသေးလေးများက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို Soshwe ရဲ့ ပရိသတ်တွေရောသိထားပြီးကြပြီလား? ဒီနေ့မှာတော့ ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အိမ်သာသုံးစက္ကူကိုအသုံးပြုရန် ဆွဲဖြဲပုံ။ ရုတ်တရက်ဆိုရင် ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်မှတ်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ရပါတယ်။ ကုထုံးပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Gilda Carle ကလည်း အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဦးရေ (၂၀၀၀) ကို အိမ်သာသုံးစက္ကူမည်သို့စုတ်ဖြဲလဲဆိုသည့် စစ်တမ်းကောက်ယူကာ ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကို ဆန်းစစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂။ ဖိနပ်ရွေးချယ်ပုံ။ သင်စီးမယ့်ဖိနပ်ကို ရွေးချယ်သည့်ပုံစံကလည်း သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ကောင်းကောင်းကြီး ထင်ဟပ်နေနိုင်ပါတယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့ရဲ့ဖိနပ်များကို ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ …
အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ? ? ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ငါအပျိုကြီးလုပ်တော့မယ်” ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေရှိလား။ တကယ်တော့ အပျိုကြီးဖြစ်မယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်နေတာဖြစ်ပြီး ကြိုက်မယ့်သူမရှိလို့ အပျိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက တကယ်တမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒီတော့ အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အဓိကတွေ့ရတဲ့အချက်တွေကို Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ ဇီဇာကြောင်လွန်းခြင်း။ လူအများက အပျိုကြီးဆိုရင် ဇီဇာကြောင်တယ်လို့ ပြောတတ်ကြတာကို ကြားဖူးမှာပါ။ ဒါက တကယ်မှန်ကန်တဲ့ စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပျိုကြီးဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးအများစုဟာ အရွေးလွန်တာကြောင့် အပျိုကြီးဘဝကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားမဲလို့၊ အသားဖြူလွန်းလို့၊ အရပ်ပုလို့၊ အရပ်ကြီးကလန်ကလားကြီးမို့၊ ဝလို့၊ ပိန်လို့၊ စကားပြောတဲ့ပုံစံကိုမကြိုက်လို့၊ အကျင့်တွေမကြိုက်လို့၊ စတိုင်လ်မကျလို့၊ ရင်မခုန်လို့ စသဖြင့် …